အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: 04/01/2010 - 05/01/2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, April 29, 2010 Thursday, April 29, 2010 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
ယနေ့သည် ဆေးရုံရဲ့ ခြောက်ထပ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်အောင် အလုပ်များလွန်းနေသည်။ ရောက်လာသော လူနာအသစ် ၁၀ယောက် အတွက် သူနာပြု ရိုစီတစ်ယောက်လည်း တစ်မနက်ခင်းလုံးနှင့် နေ့လည်တစ်နေ့လည်လုံး အလုပ်များနေသည်။ သူမနှင့် တစ်ထပ်တည်း အတူတူ အလုပ်လုပ်ကြသော ဆေးရုံအကူ ရှာရွန်နှင့် သူ့သူငယ်ချင်းတို့ ၂ယောက်လုံးကလည်း ထိုလူနာ၁၀ယောက် နေသားတကျ ဖြစ်စေဖို့နှင့် သူတို့တွေ သက်သောက်သက်သာရှိမရှိ သေချာအောင် လိုက်လံစစ်ဆေး ကြည့်ရှုနေသည်။ အလုပ်များအားလုံး ပြီးစီးသွားသောအခါတွင် ထမင်းစားချိန်ပင် ကျော်လွန်နေပြီ။ သူနာပြု ရိုစီသည် ရှာရွန်၏ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း “ကဲ ငါတို့ အနားယူဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ နေ့လည်စာ စားကြစို့”
ဆူညံနေသော ကင်တင်န်းတွင် ထမင်းစားကြဖို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လိုက်ကြရင်း ရှာရွန်မှာ သူမ၏ မျက်မှန်တွင် အစိုပြန် နေသည်ကိုပင် မသုတ်နိုင်ဖြစ်နေသည်ကို ရိုစီက သတိထားလိုက်မိသည်။ ရှာရွန့် မျက်နှာပြင်တွင် စိတ်ရှုပ်ထွေးပင်ပန်းနေခြင်း အရိပ်အယောင်မှာ အလုပ်များခြင်းသက်သက်ကြောင့် မဟုတ်မှန်းကိုလည်း ရိုစီက ထပ်မံ သတိထား လိုက်မိသည်။ “ငြိမ်လှချည်လား ရှာရွန်.. အရမ်းပင်ပန်းနေလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုဖြစ်နေသလား ” ဟူ၍ မေးလိုက်ပါသည်။
ရှာရွန့်အနေနှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ဖွင့်ပြောတော့မလိုလိုနှင့် နှုတ်ခမ်းများ တစ်လှုပ်လှုပ် တရွရွ ဖြစ်နေသော်လည်း ချက်ခြင်း စကားသံ ထွက်ပေါ်မလာနိုင်ဘဲ ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် ရိုစီ၏ ဖော်ရွေရင်းနှီးသော လေသံနှင့် သူမအပေါ်ထားရှိသော ကြင်နာခြင်းတို့ကို သတိရသွားဟန် ရှိလေသည်။ သူမနှုတ်ဖျားမှ စကားသံတစ်ချို့ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။ “ စိတ်မကောင်းဘူး ရိုစီရယ်…. ဒီ ဆေးရုံအကူ အလုပ်ကို ကျွန်မ ဆက်လုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး… ကျွန်မရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေအရ မိသားစုကို ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် ဒီထက် လစာကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်.. ကျွန်မမိဘတွေကသာ ကျွန်မရဲ့ ကလေးကို ကြည့်ရှုမထားခဲ့ရင် ကျွန်မလက်ရှိ ဒီအလုပ်ကို လုပ်နိုင်ဖို့တောင် မလွယ်ဘူး.. ခုအတိုင်းဆို ကျွန်မအတွက် အရမ်းခက်ခဲနေပြီ. ဒီလစာနဲ့ ဘယ်လိုမှကို မလောက်ငှဘူး ဖြစ်နေတယ်..” ရှာရွန်၏ အပေါ်ဝတ် အင်္ကျီအောက်မှ ထွက်ပေါ်နေသော လက်ကောက်ဝတ်တွင် ပွန်းပဲ့ရာတစ်ချို့ကို ရိုစီက အမှတ်မထင် မြင်လိုက်ရလေသည်။
“မင်းယောက်ျားကရော အလုပ်မလုပ်ဘူးလား ” ရိုစီက မေးလိုက်သည်တွင်
“သူ့ကိုတော့ ထည့်တွက်လို့ မရပါဘူး… သူဟာ အလုပ်တစ်ခုခု ရနိုင်ခြေ ရှိတဲ့လူလဲမဟုတ်ဘူး.. သောက်စား မူးရူးပြီး အမြဲတမ်း ပြဿနာရှာနေတတ်တဲ့သူ.. ”
“အိုး” ရိုစီ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိကာ ရုတ်တရက် ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်အောင် ဖြစ်သွားမိသည်။ သူမ လက်ကောက်ဝတ်က ဒဏ်ရာက သူ့ယောက်ျားကြောင့်များလား… အတန်ကြာမှ သူက ရှာရွန့်ကို ပြောလိုက်သည်။ “ရှာရွန်.. မင်းက လူနာတွေမှာ အပေါ်သိပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာ တို့သိတယ်.. ပြီးတော့ ဒီအလုပ်ကို မင်းသဘောကျတယ် နှစ်သက်တယ်ဆိုတာလဲ တို့သိတယ်.. ဒီတော့ သူနာပြုတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဘာဖြစ်လို့ သူနာပြု သင်တန်းကျောင်းကို မတက်တာလဲ.. သူနာပြုသာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် အခု လုပ်နေတဲ့ ဆေးရုံအကူအလုပ်ထက် လစာကောင်းမှာမို့ မင်းအတွက် အများကြီး ပြေလည်လာဖို့ ရှိတယ်လေ”
“ကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်မအတွက် နောက်ကျလွန်းသွားပါပြီ ရိုစီရယ်.. သူနာပြုတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ ဟိုးအရင်တည်းက ကျွန်မအမြဲမက်ခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ.. ဒါကြောင့်လဲ ဒီဆေးရုံအကူ အလုပ်ကို ကျွန်မလုပ်ခဲ့တာပါ.. အနည်းဆုံးတော့ ဒီအလုပ်နဲ့ လူနာတွေကို ပြုစုခွင့်ရတာမို့ ကျွန်မ၀မ်းသာပါတယ်.. ခုတော့ မလွဲမရှောင်သာလွန်းလို့ ဒီအလုပ်ကို စွန့်လွတ်ရမှာပါ။ ” ရှာရွန်ရဲ့ အသံမှာ နာကျင်ခြင်းတစ်ချို့ ပျော်ဝင်နေလေရဲ့။
“မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ရှာရွန်..” ရိုစီကမေးတော့ ရှာရွန်က ၃၀ကျော်ဟု ပြန်ဖြေသည်။ ရိုစီက ရှာရွန်ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်က ဒဏ်ရာကို လက်ညိုးညွှန်လိုက်ရင်း “အခုလိုပြဿနာမျိုး တို့ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင် မင်းယုံမလား ရှာရွန်.. ဒီမှာ ရှာရွန် မင်း သိပ်ကိုဖြစ်ချင်ပါတဲ့ ဆိုတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု တကယ်တမ်း လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ရာမှာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး ယုံလိုက်စမ်းပါ.. ဒါကို ဘာကြောင့် တို့က အခိုင်အမာပြောနိုင်တယ်ဆိုတာ မင်းကို ပြောပြမယ်.. ”
ရိုစီက သူ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို စတင်ပြောပြတော့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် သူ့အကြောင်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောပြလေ့မရှိပါ။ သို့သော်လည်း သူ့ဘ၀အကြောင်း ပြောပြခြင်းအားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မည်ဟု သူယူဆလျှင်တော့ ပြောလေ့ရှိပါသည်။
“တို့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အချိန်ဟာ ၁၆နှစ်ဘဲရှိသေးတယ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘာမှနားမလည်၊ ပညာလဲ မပြည့်မစုံချိန်မှာ အိမ်ထောင်ကျသွားတော့ အလုပ်ကလဲ မရှိဘူးပေါ့။ အဲဒီချိန်မှာ တို့ယောက်ျားက ၂၂နှစ်.. တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက် ၄နှစ်မှာ ကလေးက ၂ယောက်ဖြစ်လာတယ်.. ၄နှစ်အတွင်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တို့ယောက်ျားရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကို အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရတယ်.. သူဟာ ဒီလို ရိုက်နှက်တတ်မှန်း မယူခင်က တို့လုံးဝ မသိခဲ့ဘူး.. တကယ်ကို စရိုက်ကြမ်းတမ်းတဲ့သူ၊ တစ်ညမှာ သူက ထုံးစံအတိုင်းတို့ကို အပြစ်ရှာပြီး ရိုက်နှက်တယ်. အဲဒီမှာပဲ တို့ရဲ့ ရှေ့သွားတွေအားလုံးဟာ သူ့ရဲ့ အပြင်းအထန် ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ကျွတ်ထွက်ကုန်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်.. တို့လဲ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ဘယ်လိုမှ သီးခံဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာနဲ့ ကလေး၂ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး အိမ်က ဆင်းလာခဲ့တော့တယ်
သူနဲ့ တရားရုံးမှာ တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်စဲတော့ တို့ရဲ့သားလေး၂ယောက်ကို သူ့အဖေနဲ့သာ နေဖို့ တရားသူကြီးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်.. ဘာလို့လဲသိလား.. တို့က အဲဒီချိန်မှာ အသက်က ၂၀ဘဲ ရှိသေးတယ်.. အလုပ်ကလဲမရှိ ဆိုတော့ တရားသူကြီးက တို့အနေနဲ့ ကလေးတွေကို ကျွေးမွေး စောက်ရှောက်နိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့ တွက်ဆတယ်လေ.. ပြီးတော့ ကလေး၂ယောက်ဟာ တို့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ သူက ယူဆတယ်.. ဒါနဲ့ကလေးတွေဟာ သူ့အဖေနဲ့ ပါသွားခဲ့တယ်.. ဒီနောက်တော့ ပိုပြီး ဆိုးတာက တို့ယောက်ျားက ကလေး၂ယောက်လုံးကို ခေါ်ပြီး တို့နေတဲ့ မြို့ကနေ ပြောင်းရွေ့သွားခဲ့တယ်.. ဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ် ဆိုတာလဲ မသိရဘူး.. တို့က ကလေးတွေကို တွေ့ချင်လွန်းလို့ အသည်းအသန် လိုက်စုံစမ်းတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်မှာမှ လိုက်ပြီးရှာလဲ မတွေ့ရတော့ဘူး..
တရားသူကြီး ခန့်မှန်းတာလဲ မှန်ပါတယ်လေ၊ တို့ဟာ ဘ၀ကို တော်တော်လေးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ရတယ်.. စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ စားပွဲထိုးအလုပ်ကို လစာလုံးဝမရဘဲ စားသောက်သူတွေဆီက ရမဲ့ တစ်ပ်မန်းနီး လေးကို မျှော်ကိုးပြီး လုပ်ခဲ့ရတယ်.. တစ်ချို့ရက်တွေမှာ ပိုက်ဆံမရလို့ စားစရာသောက်စရာ ကောင်းကောင်း မ၀ယ်နိုင်ပဲ နွားနို့လေးတစ်ခွက်၊ ဘီစကစ်လေး ၃ချပ်၎ချပ်နဲ့ ပြီးလိုက်ရတယ်.. အဆိုးဆုံးက ဘ၀မှာ ဘာမျှော်လင့်မှ မရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်စွာနဲ့ အသက်ရှင်သန်နေရတဲ့ အဖြစ်ဘဲ.. တွယ်တာစရာ သားသမီးတွေကလဲ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်မှာ မသိ၊ ဘယ်အချိန်မှာမှ ပြန်ဆုံမယ်မသိ၊ နေရတဲ့ အခန်းကျဉ်းကျဉ်း လေးထဲမှာ အမြဲတမ်း ခြုံလွှမ်းနေတာက ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အထီးကျန်မှုပါဘဲ.. အဲဒီအချိန်မှာ အပြင်းပြဆုံးဆန္ဒက တို့ရဲ့ ကလေးတွေနဲ့ အတူတူရှိနေချင်တဲ့စိတ်ဘဲ။ သူတို့ရဲ့ ရယ်မောသံလေးတွေကြားချင်တယ်.. သူတို့နဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိနေချင်တယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး.. အဲဒီချိန်ဟာ တို့အတွက် စားစရာတောင် နပ်မှန်အောင် မစားနိုင်တဲ့ အချိန် ” ပြောနေရင်းက ရိုစီ့အသံက ဆို့နင့်ပြီး ပျောက်သွားသည်။ သူမမျက်ဝန်းတွင်တော့ မျက်ရည်စများ။ ဆယ်စုနှစ် ၃စု လောက် ကြာခဲ့တာတောင် ဒီအဖြစ်တွေကို ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း နာကျင်နေဆဲ ပါဘဲလား။
ရှာရွန့်ကို နှစ်သိမ့်ဖို့ သူမအကြောင်းကို ပြောနေသော ရိုစီကိုယ်တိုင်က အတိတ်ရဲ့ နာကျင်ခြင်းတွေကို ပြန်လည် ခံစားနေရပြန်ပါပြီ။ နောက်တော့ ရိုစ်ီက ဆက်ပြောသည်။ “ဒီလိုနဲ့ တို့ သိလာတာတစ်ခုက နာကျင်ဆွေးမြေ့ပြီး၊ အပြုံးအရယ်မရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့ဆို စားသောက်သူတွေ ဆီကနေ ဘယ်လို တစ်ပ်မန်းနီးကိုမှ ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဘဲ.. ဒီတော့ မျက်နှာကို အပြုံးဆိုတဲ့ မျက်နှာဖုံးလေး စွပ်ပြီးတော့ ချိုသာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေသုံးပြီး စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို ဆက်ပြီး ရုန်းကန်ရတော့တယ်.. တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ နည်းနည်းတော့ အဆင်ပြေစ ပြုလာတယ်. မကြာခင်မှာ အခု အိမ်ထောင်ဘက် ဖြစ်လာမဲ့ သူနဲ့ ဆုံဆည်းရပြီး နောက်အိမ်ထောင် ထပ်ပြုဖြစ်တယ်.. သမီးလေးတစ်ယောက် ရလာတော့မှ ဒီသမီးလေးအတွက် အသက်ရှင်သန်ရခြင်း ဖြစ်လာသလိုမို့ ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိလာတယ်.. ခွန်အားတွေ ရှိလာရတယ်.. နေပျော်လာတယ်.. အဲဒီအပျော်ဟာ သမီးလေးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ အိမ်ကနေ မထွက်ခွာခင်အထိပါဘဲ.. တို့ရဲ့သမီးလေး တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ အိမ်ကနေလဲ ထွက်သွားရော အိမ်မှာ နေရတဲ့ဘ၀ဟာ ဟိုအရင်တုန်းကလို အထီးကျန်ခံစားမှုမျိုး ပြန်ဖြစ်လာတယ်.. ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ.. စိတ်တွေ ကယောင်ခြောက်ခြားနဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်… ”
“တစ်နေတော့ တို့ရဲ့အမေဟာ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ ဆေးရုံတက်ရတယ်.. အဲဒီမှာ ငှားထားတဲ့ သူနာပြုလေးက အမေ့ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာကို စောင့်ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ အတွေးတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်.. ဒီသူနာပြုအလုပ်ကို လုပ်ချင်စိတ် ပေါ်လာတယ်.. လုပ်မယ်ဆိုရင် တို့အနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းလဲ မရှိဘူးလို့ တွေးမိတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခက်တာက တို့က အတန်းပညာဆိုတာ ၉တန်းလောက်သာ သင်ယူခဲ့တာမို့ ဒီသူနာပြုအလုပ်ကို လုပ်မယ်ဆိုရင် အထက်တန်းပညာကို ပြန်သင်ဖို့ လိုနေပြီ. တို့အသက်က အဲဒီချိန်မှာ ၄၀ ကျော်နေပြီဆိုတော့ ကျောင်းတက်ပြီး စာပြန်ကျက်ဖို့ဆိုတာ အလွန်မြင့်မားတဲ့ တောင်ကြီး တစ်လုံးကို တက်ရတာထက်တောင် ခက်ခဲမယ်ဆိုတာ တို့နားလည်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ တို့ကတော့ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.. အထက်တန်းပညာကို ပြန်ပြီး သင်ယူတယ်.. နေ့အချိန်မှာ ကျောင်းတက်တယ်.. ညအချိန်တွေမှာ စာကျက်တယ်.. မသိတာတွေကို သူများကို မေးဖို့လဲ ၀န်မလေးဘူး.. သင်ယူချင်စိတ်အပြည့်အ၀နဲ့ လေ့လာ သင်ယူတယ်.. ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လဲ အသက်ကြီးလို့ ကျောင်းတက်ရတာ ရှက်တဲ့စိတ်ကို ဘေးဖယ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်.. ” ရိုစီက စကားကို ခနရပ်နားလိုက်ပြန်ရင်း ရှာရွန်ရဲ့ မျက်ဝန်းထဲသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး “တို့ရဲ့ အသက် ၄၆နှစ်မှာမှ အထက်တန်းအောင် ခဲ့တယ်” ဟု လှမ်းပြောလိုက်လေသည်။
မျက်ရည်စများက ရှာရွန် မျက်ဝန်းထဲမှ တစ်လိမ့်လိမ့် ကျဆင်းလာသည်။ သူမရင်ထဲ လင်းကနဲ ပွင့်သွားတော့သည်။ အသက်၄၀ ကျော်နေတဲ့သူတောင် ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သေးသားဘဲ.. သူမက ခုမှ ၃၀ကျော်သာ ရှိသေးသည် မဟုတ်လား… ဘာဖြစ်လို့ မဖြစ်နိုင်ရမည်လဲလေ… အော်.... တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ မဲမှောင်နေတဲ့ ဘ၀ထဲက ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးချပ်တွေကို ဖွင့်လှစ်ဖို့ သော့လေးတစ်ချောင်း ကမ်းပေးလိုက်သလို ပါဘဲလား။
ရိုစီက သူမရဲ့ စကားတွေကို ပြန်ဆက်ပြန်သည်။ “နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ သူနာပြုကျောင်းကို ဆက်တက်ဖို့ စာရင်းပေးသွင်းလိုက်တယ်.. ၂နှစ်ကြာအောင် စာတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း လေ့လာကျက်မှတ် ရပြန်တယ်.. ပင်ပန်းလွန်းအားကြီးလို့ ကျောင်းကနေထွက်ဖို့ ထိတောင် အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားမိတယ်.. ဒါပေမဲ့ တို့ရဲ့ မိသားစုက အထွက်မခံဘူး… သမီးလေးကလဲ ဘေးကနေ တို့ကို ကူပြီးစာကျက်ပေးတယ်.. အားပေးတယ်.. ဒီတော့ စိတ်အားတွေ ပြန်တက်ကြွလာရပြန်တယ်.. စဉ်းစားကြည့်ပါ ရှာရွန်. လူတစ်ကိုယ်လုံးမှာ အရိုးတွေ ဘယ်နှချောင်း ရှိတယ်ဆိုတာ.. ပြီးရင် ဒီလောက်များပြားလှတဲ့ အရိုးတွေကို နံမည်မှတ်မိအောင် လုပ်ရတာကိုက တို့အသက်အရွယ်နဲ့ ဘယ်လောက်တောင် ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ.. ဒါပေမဲ့ တို့ ရအောင်ကြိုးစားပြီး မှတ်တယ်.. မှတ်နိုင်မဲ့ နည်းတွေကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ရှာကြံခဲ့တယ်.. နောက်ဆုံးတော့ သူနာပြုသင်တန်းကို အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်.. မလုပ်နိုင်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကို အသက်၄၈နှစ်အရွယ်မှာ အောင်မြင်စွာ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်.. ခုတော့ တို့ဟာ ဖြစ်ချင်တဲ့ သူနာပြုတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ်.. ခုချိန်မှာတော့ ဒီအလုပ်မှာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ မင်းတို့နဲ့အတူတူ လုပ်လာတာ အသိဘဲမဟုတ်လား ရှာရွန်၊ တို့ပြောချင်တာက တို့ဘ၀မှာလဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို လွယ်လွယ်ကူကူ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါဘဲ”
ရှာရွန်ရဲ့ နေ့လည်စာသည် အေးစက်ကုန်ပြီးတော့ အအေးခွက်ထဲမှ ရေခဲတွေသည်လည်း အရည်ပျော်ကုန်တဲ့ အချိန်တွင်မှ ရိုစီ၏ စကားတွေသည် ပြီးဆုံးသွားတော့သည်။.. ရှာရွန်က မျက်ရည်များကို အသာတို့သုတ် လိုက်ရင်း ရိုစီကို ပြောလိုက်သည်။ “ကျွန်မကြောင့် ရှင့်အတိတ်အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောဖြစ်တော့ အသစ်ပြန်ဖြစ်ပြီး နာကျင်ရတယ်နော်… စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်…” ရိုစီကလဲ မျက်ရည်များကြားမှ ပြုံးလိုက်ရင်း “တို့ရဲ့ အတိတ်အကြောင်းကို ပြောလို့ မင်းအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် နာကျင်ရပေမဲ့ အကျိုးရှိတယ် မဟုတ်လား.. ဒီမှာ ရှာရွန် ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ရှိနေခဲ့ရင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မတွေးပါနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သာ လိုပါတယ်.. အခုလဲ မင်းဟာ သူနာပြုတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိနေတယ် မဟုတ်လား.. ဒီတော့ ဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားပါ.. တို့ ယုံကြည်ပါတယ်.. မင်းဟာ တကယ်ထူးချွန်တဲ့ သူနာပြုတစ်ယောက် ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာပါ။ သူနာပြု သင်တန်းကျောင်းကို တက်ဖြစ်အောင် တက်မယ်လို့ တို့ကို ကတိပေးပါရှာရွန်… မင်း သူနာပြုတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲ အခုလိုဘဲ စိတ်ပျက် အားငယ်နေသူတွေကို မင်းအတွေ့အကြုံတွေ ပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့ သူတို့ကို စိတ်အားတက်အောင် လုပ်ပေးပါ. ကူညီပေးလိုက်ပါ.. ယုံကြည်ချက်ပန်းတိုင်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဇွဲနဲ့ လှော်ခတ်ဖို့ တွန်းအားတွေ ပေးပါ” ဟု ရှာရွန့်ကို ရိုစီက ပြောသောအခါတွင် ရှာရွန်က ခိုင်မာသော ကတိကို သူမအား လှိုက်လှဲစွာ ပေးလိုက်ပါသည်။
နှစ်အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက်မှတော့ ရှာရွန်ဟာ သူနာပြုတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတော့သည်။ သူနာပြု ဖြစ်လာသောအခါ သူ့ကို လမ်းညွှန် အားပေးခဲ့သော ရိုစီ အငြိမ်းစားမယူခင်ချိန်ထိ ဆေးရုံတစ်ခုတည်းမှာ အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး. ခုချိန်မှာတော့ ရှာရွန်ဟာ စားပွဲတစ်ခုမှာထိုင်ရင်း တစ်ချိန်က သူခံစားခဲ့ရသလို ကိုယ်ရောစိတ်ပါ နာကျင်ခံစား နေရသူများ၊ အကူအညီလိုအပ်နေသူများကို သူ့ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ပြန်လည်ဝေမျှရင်း တစ်ခါက သူ့ကို ရိုစီ အားပေးခဲ့ဖူးသော စကားဖြစ်သည့် “ဘ၀မှာ ကိုယ့်အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူး” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့အတူ အားပေးနှစ်သိမ့်လို့ နေတတ်ပါပြီ။
Chicken Soup for the Working Woman's Soul မှ Linda Apple ရဲ့ Never Too Late ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, April 23, 2010 Friday, April 23, 2010 Labels: ရသစာစုများ
အဖွားမေရီသည် စိတ်သဘောပြည့်ဝပြီး အေးချမ်းသိမ်မွေ့ကာ အဖိုးအပေါ်မှာလည်း အစွမ်းကုန် ချစ်ခင်ပြုစု ယုယတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးကတော့ တစ်ချိန်တုန်းခါက စိတ်မြန်လက်မြန်နှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ မိသားစု စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့ကို အစစ ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၂ကြိမ်လောက် လေဖြတ်ခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်တွင်း အိမ်ပြင် လမ်းလျှောက်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်၊ စကားပြောဖို့လဲ နှုတ်က မသွက်တော့ဘဲ လေးလံထိုင်းမှိုင်း ဖြစ်နေရပါပြီ။ ဘုရားကျောင်းလည်း မသွားနိုင်၊ အိမ်နီးနားချင်း အိမ်တွေကိုလည်း မလည်ပတ်နိုင်ခဲ့တာ တစ်နှစ် နီးပါး ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးသည် သူ၏ အချိန်တော်တော်များများအား တီဗီရှေ့တွင် ထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေ ရသည်သာ များလေသည်။ အဖိုးတစ်ယောက် အဖွား အလုပ်လုပ်နေချိန်တွေတွင် တီဗီမှ လာသော သတင်း အစီအစဉ်နှင့် အခြား အစီအစဉ်များကို ထိုင်ကြည့်ရင်း နေခဲ့ရသည်။ သူမ အားလပ်သည့်အခါတွင်တော့ ၂ယောက်သား စကားပြောရင်း၊ တီဗီကြည့်ရင်း စာဖတ်ကြရင်း အချိန်ကုန်ရတော့သည်။ အဖိုးအတွက်မှာ အဖွား၏ အကူ အညီသာ မပါလျှင် ထိုင်ခုံကနေ နေရာရွေ့ဖို့၊ အိပ်ရာဆီ သွားဖို့တောင် ခက်ခဲလွန်းလှပါသည်။
အဖွားသည် နေ့စဉ် အဖိုးကို အိပ်ရာမှ ထစေပြီး နံနက်စာ စားရန် ထမင်းစားခန်းကို သွားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးလေ့ရှိသည်.. နံနက်စာ စားသောက်ပြီးချိန်မှာတော့ သူမပန်းကန်တွေ ဆေးကြော သန့်စင်နေတုန်း အဖိုးခေတ္တအနားယူစေဖို့ ဧည့်ခန်းထဲက အဖိုးထိုင်နေကျ ပက်လက်ကုလားထိုင်လေးမှာ ထိုင်ခိုင်းထားကာ တီဗီကြည့်စေပါသည်။ ပန်းကန်ဆေးကြော သန့်စင်နေရင်းနှင့်လည်း အဖွားသည် အဖိုးတစ်ခုခု လိုအပ်သလား၊ ဘာလုပ်ပေးဖို့ လိုဦးမလဲ ဆိုတာကို မကြာခန လှမ်းလှမ်းကြည့်ပြီး မေးလေ့ရှိသည်. ဒီလို အဖြစ် အပျက် တွေသည် အဖိုးနှင့်အဖွားတို့၏ နေ့စဉ် အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးအပေါ်တွင် အဖွားမေရီ တစ်ယောက် မငြီးမငြူ ဂရုတစိုက် ပြုစုယုယကာ အိမ်ထောင်သက် နှစ်၅၀ ကြာလာသည့်တိုင် အဖိုးအပေါ် သူမ၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုက လန်းဆန်း တောက်ပနေတုန်း၊ အိမ်ထောင်ဦးကာလက ကဲ့သို့ နုနယ် ပျိုမြစ်နေတုန်းသာ။
အဖွားသည် အဖိုးအပေါ်တွင် အလွန်တရာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာရှိခဲ့သော်လည်း အဖိုးကတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တာဝန်ကျေအောင် ထမ်းဆောင်ပြီး ဇနီးမယားအပေါ် ယုယုယယ မနေတတ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ရင်ထဲက အချစ်ဆိုတာကိုလည်း အဖွားသိအောင် ဘယ်ခါမှ ထုတ်ပြောတတ်သူ ၊ ပြောခဲ့သူ တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အိမ်ထောင် သက်တမ်းကာလ တစ်လျှောက်မှာ အဖိုးက အဖွားအတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင် ဆိုတာ ဘယ်သောခါမှ ၀ယ်ပေးခဲ့သည်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါ။ အဖိုး၏ ခံယူချက်မှာ ငွေကြေးဥစ္စာ လုံလောက်အောင် ရှာဖွေပေးပြီး ဖြစ်သဖြင့် အဖွားလိုအပ်တာမှန်သမျှ စိတ်တိုင်းကျ ၀ယ်ယူခွင့် ရှိနေပြီဖြစ်၍ သူမ ကြိုက်နှစ်သစ်ရာ ၀ယ်ယူပါစေ၊ သူကိုယ်တိုင် ၀ယ်ပေးဖို့ မလိုအပ် ဟူသော အတွေးမျိုးရှိသူဖြစ်သည်။
အဖိုး၏ ထိုအကျင့်စရိုက်သည် အိမ်ထောင်ဦးကာလတွင် အဖွားအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အဖိုးသည် သူမအား တကယ် ချစ်မှ ချစ်ခဲ့ပါရဲ့လား ဟူသော သံသယသည် အဖွားမေရီ စိတ်ထဲတွင် အမြဲတမ်း ဖိစီးခဲ့သော်လည်း အိမ်ထောင်သက်တမ်း ကြာလာသည်နှင့် အမျှ အဖွားဖြစ်သူမှာ အဖိုးကို သဘောပေါက်နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားရတော့သည်။ အဖိုးသည် အိမ်ထောင် တစ်ခုလုံးအတွက်ရော သူမအတွက်ပါ အလွန်ကောင်းမွန်သော အိမ်ထောင်ဦးစီး ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်မှာ သူမ အသိဆုံးဖြစ်သည်။ မိသားစုအတွက် လိုလေသေး မရှိရအောင် လိုအပ်သော ငွေကြေးကို ရှာဖွေပေးခဲ့သည်။ အဖွား လိုချင်သော ပစ္စည်းဟူသမျှ စိတ်တိုင်းကျ ၀ယ်ယူခွင့်ပေးထားသဖြင့် အဖိုး ကိုယ်တိုင် ၀ယ်မပေးတတ်သော လက်ဆောင်နှင့် ထုတ်မပြတတ်သော အဖိုး၏ အကြင်နာတို့အတွက် သူမ လိုချင်တပ်မက်စိတ် ၊ မက်မောစိတ် ဖြစ်မနေတော့ အောင် သူမကိုယ်ကို ကြိုးစား၍ စိတ်ကို ဖြေသိမ့်တတ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ အဖိုး၏ ချစ်ခင်ယုယမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှုတို့ကိုလည်း ရရှိသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ အဖိုးအပေါ်ထားသော သူမ၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးစိတ်၊ ကြင်နာသဒ္ဓါစိတ် တို့ကို ယခင်အတိုင်း ထားမြဲထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
တစ်နေ့... ဖေဖော်ဝါရီလ၏ အေးမြသော မနက်ခင်းတစ်ခုတွင် အဖွားသည် တီဗီကြည့်နေသာ အဖိုးထံသို့ လျှောက်လာကာ “ကျွန်မ နေ့လည်စာ ချက်ပြုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ဦးမယ်” .. ဟု တီဗီ ကွန်ထရိုလ်းကို အဖိုးလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရင်း ပြောလိုက်ပါသည်။ “တစ်ခုခု လုပ်ချင်ရင် လိုချင်ရင် ကျွန်မ အပြင်ထွက်လာတဲ့အထိ ခနလောက်စောင့်နော်.. တစ်ယောက်တည်း မနိုင်မနင်း လျှောက်မလုပ်နဲ့ ”.. ဟု စိတ်မချစွာ ထပ်ပြောကာ မီးဖိုခန်းထဲသို့ အဖွား ၀င်ရောက်သွားပါသည်။ အချိန်အနည်းငယ် ကြာသော် စားသောက်စရာများ ချက်ပြုတ်ပြီး၍ အိမ်ရှေ့သို့ ပြန်ထွက်အလာတွင် အဖိုးကို ကုလားထိုင်တွင် မတွေ့ရတော့ပေ..
အဖွားမှာ ရုတ်တရက် ပြာဝေသော စိတ်ဖြင့် အဖိုးကိုင်နေကျ တောင်ဝှေးထားရာ နေရာကို ကြည့်လိုက်သည့် အခါတွင်လည်း တောင်ဝှေးမှာ နေရာတွင် မရှိတော့ပေ။ အ၀တ်ဘီရိုမှာ ပွင့်လျှက်ရှိပြီး အဖိုး၏ အပေါ်ဝတ် ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ဦးထုပ်မှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ။ အဖိုးသည် တစ်နေရာရာသို့ ထွက်ခွာသွားပေပြီ။ သွေးရူး သွေးတန်းဖြင့် ဘီရိုတွင်းမှ ကုတ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို အမြန်ကောက်ဝတ်ကာ အဖွားသည် အိမ်တွင်းမှ အပြေးတစ်ပိုင်း ထွက်ကာ ဟိုဟိုဒီဒီ မျှော်ကြည့်မိလေသည်။ အဖိုးသည် ခပ်ဝေးဝေးတော့ ရောက်လိမ့်ဦးမယ်ဟု သူမ မထင်ပေ။ သူတစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်မှာ သေချာသည်လေ။ လမ်းမပေါ်တွင်မူ အဆက်မပြတ် ကျဆင်းလာနေသော ဖြူလွလွ နှင်းပွင့်လေးများပင် ဖုံးလွှမ်းစ ပြုနေပြီဖြစ်သည်။
ယခုလိုအချိန်တွင် လူကောင်းတစ်ယောက်ပင် လမ်းလျှောက်ဖို့ ခက်ခဲနေပြီဖြစ်ရာ အဖိုးလို တစ်ယောက်ယောက် အကူအညီနှင့်မှ လမ်းလျှောက်နေရသူ တစ်ဦးအတွက် ဆိုလျှင်တော့ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိတော့ပေ။ “သူဘယ်ရောက်နေပြီလဲ .. ဘာကြောင့် အိမ်ကနေ မပြောမဆို တစ်ယောက်တည်း ထွက်သွားရတာလဲ ” သူမအတွေးတွေတွင် ပူပန်ခြင်း နားမလည်နိုင်ခြင်းများစွာ ရောထွေးလျှက်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်နှယ်နေမိရင်း လမ်းမပေါ် ဂဏှာမငြိမ်စွာ ဟိုဘက်လျှောက်၊ ဒီဘက်လျှောက်ဖြင့် အရူးတစ်ယောက်နှယ်။ ကျဆင်း လာနေသော နှင်းဖွဲများကိုလည်း ဂရုမထားမိ၊ ရက်စက်လွန်းစွာ အေးလှသော ဆောင်းဒဏ်ကိုလည်း သတိမပြု မိလောက်အောင် သူမ၏ စိတ်အစဉ် တစ်ခုလုံး အဖိုးအတွက် ပူပန်ရခြင်းများဖြင့်သာ ရင်မှာ လောင်မြိုက်လို့ နေခဲ့သည်။
ထိုစဉ် လမ်းထောင့် တစ်နေရာမှ တစ်လှုပ်လှုပ် လျှောက်လာသော တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ပုံရိပ်ကို သူမ တွေ့လိုက်ရလေသည်။ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်လိုက်သောအခါ အဖိုးဖြစ်မှန်း သေချာသွားလေသည်။ “အိုး သူပြန်လာပြီ” အဖိုး ဘယ်ကိုသွားပြီး ပြန်လာသည်ဖြစ်စေ သူမမျက်စိရှေ့တွင် ဘေးမသီ ရန်မခ မြင်လိုက်ရသည်ကပင် ၀မ်းသာလွန်းလှပြီ။ သူမကျေနပ်ရပါပြီ.. အဖိုး၏ ကုတ်အင်္ကျီသည် ပုခုံးထက်မှ လျှောကျလို့ နေပြီး အဖိုး၏ လက်တစ်ဖက်တွင် တောင်ဝှေးနှင့် အတူ အထုပ်တစ်ထုပ်ကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ အဖိုးရောက်အလာကို စောင့်ဆိုင်းဖို့ စိတ်မရှည်နိုင်ဘဲ သူ့ဆီသို့ အရောက်ပြေးသွားမိတော့သည်။ အဖိုး အခြေအနေ ကောင်းမွန်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသဖြင့် စိတ်သက်သက်ရာ ရပြီးနောက်တွင် သူမပါးစပ်မှ စကားလုံးများ အဆက်မပြတ် ထွက်လာမိတော့သည်။
“ကျွန်မ ရှင့်ကို ခနလေး ထားပြီး နေ့လည်စာ သွားပြင်ဆင်ချိန်လေးမှာ ကျွန်မ ပြန်အလာကိုတောင် မစောင့်နိုင်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း ထွက်သွားရအောင်က ရှင်ဘာကိုများ ဒီလောက်အရေးတကြီး လိုအပ်နေလို့လဲ… ရှင့်ကို ကျွန်မ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပူရတယ်ဆိုတာ ရှင်မသိဘူးလား… ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်အရာကများ ရှင့်ကို အရေးတကြီး အပြင်ထွက်သွားရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲ.. ” ဟု ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သိချင်စိတ်ကို ထိမ်းချုပ်မရတော့ဟန်နှင့် အဖိုးလက်ထဲမှာ ကိုင်ထားသော အထုပ်ကလေးကို အမောတကော ဆွဲယူလိုက်လေသည်။ အဖိုးထံမှ ထွက်ပေါ်လာမည့် ရှင်းပြစကားကိုပင် စောင့်ဆိုင်းနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ အထုပ်ကလေးကို လျှင်မြန်လွန်းလှသော စိတ်ဇောဖြင့် စက္ကူများကို ဆွဲဖြည်မိတော့သည်။ အထုပ်တွင်းမှာတော့ ဘူးကလေးတစ်ခု၊ ဘူးကလေးကို တုန်ယင်တဲ့ အဖွားရဲ့ လက်အစုံနဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်တွင်
အံ့သြခြင်းကြီးစွာဖြင့် အဖိုးမျက်နှာကို အဖွားက စောင်းငဲ့၍ ကြည့်လိုက်သည်တွင် “ဒီနေ့ဟာ ငါတို့ရဲ့ နှစ်၅၀ပြည့် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့လေ. ငါ့ဘ၀မှာ မင်းကို လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မပေးခဲ့ဖူးဘူးနော်.. ဒီတစ်ခေါက်တော့ ငါ့ရင်ထဲမှာ မင်းကို လက်ဆောင်ပေးချင်စိတ် ပြင်းပြင်းပြပြကို ဖြစ်မိတယ်.. မင်းဟာ ငါ့အပေါ် အမြဲတမ်း ကောင်းနိုင်ခဲ့၊ ချစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ခုလို ငါမသန်မစွမ်း ဖြစ်တော့လဲ အနစ်နာခံပြီး မငြိုမငြင် ပြုစုခဲ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ ငါ့ဘက်က မင်းအပေါ်မှာ ဘာမှ တာဝန် မကျေခဲ့သလို ခံစားမိတယ်.. မင်းရဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ ချစ်ခင် မြတ်နိုးမှုတွေကို အသိအမှတ် မပြုသလို နေခဲ့မိတယ်.. ဒါကြောင့် မင်း ချက်ပြုတ်နေတုန်း ခန အပြင်ထွက်သွားပြီး ဒါလေးကို သွားဝယ်တာပါ… ဒီ လက်ဆောင် လေးဟာ ငါ့တစ်သက်မှာ မင်းကိုပေးဖူးတဲ့ ပထမဆုံး လက်ဆောင်လဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်.. ဒါလေးကို ငါတို့ရဲ့ နှစ်၅၀ပြည့် မင်္ဂလာ လက်ဆောင်အဖြစ်ရော၊ ငါ့ရဲ့ ချစ်လက်ဆောင် အဖြစ်ပါ အသိအမှတ်ပြုပြီး မင်းလက်ခံပေးပါနော်.. ” အဖိုးထံမှ သူမဘယ်တုန်းကမှ မရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နုညံ့ချိုသာသော အသံကို တိုးညှင်းစွာ၊ ဖြေးလေးစွာ၊ တုန်ယင်စွာနှင့် မသဲမကွဲ ကြားလိုက်ရတော့သည်။ သို့သော် မသဲကွဲပေမဲ့ အဖိုးပြောသမျှကို သူမ လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားလည်နိုင်ပါသည်။ ဒီလူနှင့် နေခဲ့သည်မှာ နှစ် ၅၀ပင် ရှိခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလားလေ။
အဖွားမျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်များ ပြည့်လျှံ အိုင်ထွန်း လာပါတော့သည်။ အဖိုး၏ လက်ကလေးကို အသာအယာ ဆွဲကိုင်ကာ သူမ ပါးပြင်နှစ်ဘက်ပေါ် အပ်ထားမိလိုက်တော့ အဖွား၏ မျက်ရည်များက အဖိုး၏ လက်ပေါ်သို့ တစ်သွင်သွင် စီးကျလာ တော့သည်။ ထို့နောက်တွင် အဖိုးရဲ့ လက်ကို ခိုင်မြဲစွာ တွဲကာ အိမ်ဆီသို့ ၂ယောက်သား ပြန်လာခဲ့ကြတော့သည်။ အဖွား၏ မျက်နှာပေါ်တွင် မျက်ရည်စများနှင့် သို့သော် ကြည်နူးမှု အပြုံးလေးတစ်စက တွဲခိုလျှက်။ အဖိုး၏ မျက်နှာပေါ်တွင်လည်း ကြည်နူးမှု အပြုံးလေးက မပီဝိုးဝါး ခပ်ရေးရေးလေး။ သို့သော် အဖိုး၏ ကြည်နူးမှုအပြုံးကို အဖွားတစ်ယောက် ကောင်းစွာ ခံစားသိရှိပါလိမ့်မည်။ ဘယ်တုန်းကမှ မဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ အဖိုး၏ အချစ်တို့သည် ယခုအချိန်ရောက်မှ အဖွားတစ်ယောက် သိခွင့် ရလိုက်သော်လည်း သူမစိတ်ထဲ တွေးနေမိသည်က “အချစ်အကြောင်း ပြောဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူးလေ”.. ဟူ၍သာ..။ ထို့နောက်တော့ “ကျွန်မကို လက်ဆောင်မပေးလဲ ရှင့်ကို အမြဲချစ်နေမှာ၊ ဂရုစိုက်နေမှာပါ အဖိုးကြီးရယ်” ဟု ရှက်ပြုံး၊ ကြည်နူးသည့် အပြုံးလေးနှင့် အဖိုးကို ပြောလိုက်ပါတော့သည်။
ကျွန်မတို့တွေလဲ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ် ချစ်ခင်ရသူများကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ အကြောင်းကို သိအောင် ပြောပြဖို့ နှောင့်နှေးခဲ့ကြ ဖူးမလား မသိဘူးနော်.. ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့် နောက်မကျသေးခင်မှာ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့ အကြောင်းကို ၀န်မလေးဘဲ ပြောထွက်ကြဖို့ ကြိုးစား ကြပါဦးစို့လားနော်.... ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတိုင်း အတွက်မဆို လိုအပ်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်၊ ခွန်အားတစ်လက်ဘဲ မဟုတ်ပါလားရှင်.......
Chicken Soup for the Bride's Soul မှ Danise Jacoby ရဲ့ A Change of Heart ကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။ အားလုံးဘဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ အေးချမ်းကြပါစေရှင်..
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာ (၆)
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, April 14, 2010 Wednesday, April 14, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
အသက်အရွယ်ကြီးကြီး စုံတွဲတစ်တွဲဟာ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားတွေ ကျဆင်းကုန်တာနဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းအောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကို သွားရောက်ပြီး သင်တန်းတက်ကြပါတယ်..
သင်တန်းတက်လို့ ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ အဖိုးအိုဟာ အိမ်အပြင်ကိုထွက်ပြီး အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးနဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုနေပါတယ်..
“ခင်ဗျားတို့ သင်တန်းဆရာရဲ့ နံမည်က ဘယ်သူလဲဗျ ” အိမ်နီးချင်းက မေးပါတယ်..
“အင်း နေဦး ကျုပ်စဉ်းစားပါရစေဦး.. ခင်ဗျားသိလား ပန်းတစ်မျိုးဗျာ.. အနံ့လေးက မွှေးတယ်.. တော်တော်လဲလှတယ်. ဒါပေမဲ့ သူ့ရိုးတံမှာ ဆူးတွေနဲ့လေဗျာ…”
အိမ်နီးချင်းက “နှင်းဆီပန်း လေဗျာ ” လို့ပြန်ဖြေတယ်..
“အား ဟုတ်တယ် နှင်းဆီ..” လို့ ရေရွတ်ပြီး အိမ်ထဲကိုလှည့်ကာ “ ဟေ့ မနှင်းဆီ .. ငါတို့ သင်တန်းကျောင်းက ဆရာရဲ့ နံမည်က ဘယ်သူလဲကွ ” လို့ အိမ်ထဲက မိန်းမဖြစ်သူကို လှမ်းမေးလိုက်ပါတော့တယ်…
( တော်တော် ဆိုးပါလား.. မိန်းမနံမည်တောင် ဒီလောက် ဆက်စပ် စဉ်းစားယူနေရတယ်.. ) :) :)
အရက်သမားတစ်ယောက်ဟာ ငိုယိုပြီး အရက်ဘားတစ်ခုထဲကို ၀င်လာပါတယ်.. လူတစ်ယောက်က သူ့ကို “ဘာဖြစ်လာတာလဲ ”လို့ လှမ်းမေးလိုက်တော့ “ကျွန်တော် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ခဲ့မိပြီဗျာ.. လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နာရီလောက်က ကျွန်တော့မိန်းမကို တောင်ပိုင်းကလာတဲ့ အရက်တစ်ပုလင်းနဲ့ ကျွန်တော် ရောင်းပစ်လိုက်မိတယ်” လို့ ငိုရှိုက်ရင်း ဖြေပါတယ်..
“ဟာ ဆိုးလိုက်တာ.. ဒါဆို အခု ခင်ဗျား နောင်တရနေပြီပေါ့.. ခင်ဗျားမိန်းမကို ပြန်လိုချင်နေပြီမဟုတ်လား ”ထိုလူက အရက်သမားကို ပြန်ပြောပါတယ်..
“ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ”.. အရက်သမားကလည်း ငိုရင်းက ပြန်ဖြေပါတယ်..
“ခုတော့ ခင်ဗျား သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ အခုချိန်ကျမှာ သဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လား.. ခင်ဗျားသူ့ကို ခုထိ ချစ်နေသေးတယ်မဟုတ်လား ”
“မဟုတ်တာဗျာ.. ကျွန်တော် သူ့ကိုပြန်လိုချင်တာက ကျွန်တော်အခု အရက်သိပ်သောက်ချင်နေပြီဗျ..”
(ဒီလိုလူတော့ ဝေးဝေးက ရှောင်မည်) :) :)
အမေရိက ကနေ အစ္စရေးကို အလည်ရောက်နေတဲ့ မောရစ်စ် နဲ့ သူ့ဇနီးဟာ လက်ဆောင်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် ရှေ့မှာ ထိုင်ရင်း အတူလာတဲ့ အခြားခရီးသည်တွေ ရောက်အလာကို စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်.. ဒီအချိန်မှာ အာရပ် အရောင်းသမားတစ်ဦးဟာ ရောင်းချစရာ ပစ္စည်းတစ်ချို့တစ်လေကို သယ်ပိုးပြီး သူတို့၂ယောက်ဆီ ရောက်လာကာ သူ့ထံက ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ယူဖို့ ပြောဆိုရောင်းချပါတယ်.. သို့သော်လည်း ပစ္စည်းတစ်ခုတစ်လေကိုမှ မောရစ်စ်တို့က မ၀ယ်ယူပါဘူးတဲ့.. ဒီတော့ အာရပ်က မောရစ်စ်ကို “ ဘယ်က လာသလဲ ”လို့ မေးပါတယ်..
အမေရိက လို့ မောရစ်က ပြန်ဖြေတော့ ဆံပင်အနက်ရောင်၊ သံလွင်သီးရောင် အသားအရေရှိတဲ့ မောရစ်စ်ရဲ့ ဇနီးကိုကြည့်ပြီး “သူကတော့ အမေရိက ကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်” .. လို့ မေးပြန်ပါတယ်..
သူ့ဇနီးဖြစ်သူက “ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ အမေရိက က မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ဖြေပါတယ်..
“ဒါက ခင်ဗျားယောက်ျားလား” လို့ မောရစ်ဘက်ကို လက်ညိုးညွှန်လိုက်ကာ မေးပြန်ပါတယ်..
ဒီတော့ အမျိုးသမီးက “ဟုတ်တယ် ကျွန်မယောက်ျားပါ”လို့ ဖြေပါတယ်..
အာရပ်က မောရစ်စ်ဘက် လှည့်လိုက်ပြီး “ခင်ဗျား သူ့ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် သူ့အတွက် ကုလားအုတ်အကောင်တစ်ရာ ပေးချေပါ့မယ်.. ” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်. ဒီတော့ မောရစ်ဟာ အချိန်တော်တော်ကြာ စဉ်းစားနေပြီးမှ “ သူက ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
မောရစ်စ်စကားကြားတော့ အာရပ်လည်း လှည့်ထွက်သွားပါတယ်.. ဒီမှာတင် မောရစ်စ်ရဲ့ မိန်းမက ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ “ရှင် ဒီအဖြေပေးဖို့ ဘာကြောင့် ဒီလောက်စဉ်းစားနေတာလဲ” လို့မေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီတော့ မောရစ်စ်က “အား ငါက ဒီကုလားအုတ် အကောင်တစ်ရာကို သယ်ပြီး ဘယ်လိုအိမ်ပြန်မလဲလို့ စဉ်းစားနေလို့ပါ ” တဲ့။
မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင်
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အနှစ်၃၀ပြည့် နီးကပ်လာချိန်မှာ နှစ်၃၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဘာလက်ဆောင် လိုချင်သလဲလို့ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကို မေးပါတယ်..
ယောက်ျား။ ။ မိန်းမရေ.. အင်္ကျီကောင်းကောင်း လှလှလေးတွေ လိုချင်သလား
မိန်းမ ။ ။ တော်ပါပြီ.. မလိုချင်ပါဘူး
ယောက်ျား။ ။ ဒါဆို ကားအသစ်တစ်စီး ယူမလား
မိန်းမ ။ ။ ဟင့်အင်း.. မယူတော့ပါဘူး
ယောက်ျား။ ။ ဒါဆို အိမ်အသစ်လှလှလေး တစ်လုံးလား
မိန်းမ ။ ။ ဟင့်အင်း
ယောက်ျား။ ။ ဒါဆို မင်းဘဲပြော… နှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင် ဘာယူမလဲဆိုတာ
မိန်းမ ။ ။ ကျွန်မ ရှင်နဲ့ ကွာရှင်းချင်တယ်….
ယောက်ျား။ ။ အိုး.. ဆောရီး အချစ်ရေ.. ကိုယ် ဒီလောက်ငွေကုန်ကြေးကျများမဲ့ ကိစ္စအတွက် အစီအစဉ် မလုပ်ရသေးဘူး။
(ဟုတ်တာပေါ့.. ကွာရှင်းရင် မိန်းမဖြစ်သူကို ယောက်ျားက ပိုင်ဆိုင်သမျှရဲ့ တစ်ဝက်ကို ခွဲပေးရမှကိုး) :) :)